အာမခံပြIssueနာ - Mic LED
MIC LED guarantees that all the products made and sold by MIC LED are strict quality-controlled to reach the standard for3years warranty. ၃ နှစ်အာမခံတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ပြီးနောက် ၆ လအတွင်း MIC LED သို့မဟုတ်တတိယပါတီစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တို့၏အရည်အသွေးပြproblemsနာများရှိကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုထားသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပုံမှန်သုံးနေစဉ်တွင် ၆ လမှ (ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ပြီးနောက်) မှ ၁၂ လအထိအချိန်ကာလအတွင်း MIC သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ၁၂ လမှ ၂၄ လအထိ MIC သည်ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်တစ်ဝက် (ပို့ဆောင်ကုန်ကျစရိတ် ၅၀%) ကိုကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ၂၄ မှ ၃၆ လအထိ MIC သည်အစိတ်အပိုင်းများကိုသာကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ထိုအခါကုန်ကျစရိတ်ဖောက်သည်အားဖြင့်ယူဆပါလိမ့်မယ်။
Warranty Issue specifically excludes the following：
ရောင်းချသူ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ disassembly ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် refit ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ 3. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
၄။ လျှပ်စီးလက်ခြင်း၊ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း၊ မြေငလျင်များသို့မဟုတ်ရေကြီးမှုများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သော်လည်းပျက်စီးခြင်း
၆.၃% ထက်နည်းသော LED Chip သည်မီးချောင်းတစ်ခုတည်းတွင်လောင်ကျွမ်းသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ MIC ဦး ဆောင်သည့်အဖွဲ့သည်အခြေအနေအောက်တွင်တာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ
၇။ MIC ဦး ဆောင်သောပြောင်းဖူးမီးအလင်းရောင်စီးရီးကိုတံခါးပိတ်မီးသီးများသို့မဟုတ် lampshades များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Damages caused by DHL, FEDEX or UPS express. the customer have to open the parcels Before signing the courier receipt. if there are caused by express, can not sign the courier receipt. we will ask them compensate for loss and deliver the new lamp to you. we will not take the responsibility if the customer do not open and check the parcels before signing the waybill.